လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၉,၀၀၀ လောက်ကတည်းက ယနေ့တိုင် တည်ရှိနေသေးတဲ့ ကျောက်ဆောင်ကြားကမြို့လေး - Mckzone Daily
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလောက်ကတည်းက အခုချိန်အထိ တည်ရှိနေသေးတဲ့ ကျောက်ဆောင်မြို့တွေမှာ နေထိုင်တယ်ဆိုပါစို့ ။ အဲ့တာက ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သင်ထင်ပါသလား? ။၎င်းလို ကျောက်ဆောင်ကိုဖောက်ပြီးနေထိုင်တဲ့မြို့တစ်မြို့က နှစ်ပေါင်း ၉,၀၀၀ ခန့် သက်တမ်းရှိတဲ့ အီတလီနိုင်ငံ မှာ အမှန်တကယ်တည်ရှိနေပါသေးတယ်။၎င်းမြို့ရဲ့အမည်က Sassi di Matera ဖြစ်သလို အီတလီရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာ တည်ရှိပြီး ၎င်းဟာ တရားဝင်တည်ရှိဆဲသက်တမ်းအရှည်ဆုံးမြို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်မြို့လုံးက မတ်စောက်တဲ့ မြစ်ကမ်းနားပေါ်မှာ တည်ရှိပြီး UNESCO က ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းနေရာက Flintstones ကာတွန်းထဲက တစ်ခုခုနဲ့တူပြီး အိမ်တွေကို ကျောက်ဆောင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
မြို့ထဲမှာ လူတွေနေထိုင်နေသေးတဲ့အချက်က ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစေပါတယ်။မြို့ထဲမှာ နေထိုင်ခြင်းက ရုန်းကန်မှုးများနှင့်အတူ ပါဝင်ပါတယ်။၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်း အထိ ၎င်းနေရာမှာ ရေပေးဝေမှု ၊ လျှပ်စစ်မီး နှင့် မိလ္လာစနစ်တွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။အိမ်တွေကို ကျောက်ဆောင်ထဲသို့ ချောမွေ့စွာ ထွင်းထုထားပြီး ချောက်ကမ်းပါးဆီကို တဖြည်းဖြည်းတက်လာတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ နောက်ကျောလမ်းကြားများနှင့် လှေကားထစ်များကိုလည်း ဖန်တီးထားပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ ဒေသခံတွေက ၎င်းနေရာကနေ ပြောင်းရွေ့ဖို့ မတွန့်ဆုတ်ခဲ့ကြပါဘူး။သူတို့က ပိုပြီးခေတ်မီတဲ့ Matera မြို့သို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့တာကြောင့် ယခုအချိန်မှာ ၎င်းနေရာမှာ လူအနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိပါတော့တယ်။
၎င်းမြို့ကို UNESCO က ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒေသခံတွေက အလွန်ဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြပါတယ်။၎င်းမြို့တော်ရဲ့ပုံရိပ်ဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာ screen time လည်း အပြည့်အဝရရှိထားပါတယ်။လိုဏ်ဂူဥမင်များစွာကို နွေးထွေးတဲ့နေအိမ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသလို အချို့ကလည်း စားသောက်ဆိုင်နှင့် ဟိုတယ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲစေခဲ့ကြပါတယ်။၎င်းမြို့လေးက ကျွန်တော်မြင်ဖူးခဲ့သမျှ မြို့တွေထဲကမှ ချစ်ဖို့အကောင်းဆုံးမြို့လေးတစ်မြို့လို့ ထင်မိပါတယ်။စာဖတ်သူတို့လည်း ရှေးခေတ်အငွေ့အသက်လေးတွေကို အပြည့်အဝခံစားချင်ရင်တော့ ၎င်းမြို့လေးကို တစ်ခေါက်လောက်တော့ အလည်သွားကြည့်သင့်ပါတယ်ဗျာ။
လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျးမြားစှာလောကျကတညျးက အခုခြိနျအထိ တညျရှိနသေေးတဲ့ ကြောကျဆောငျမွို့တှမှော နထေိုငျတယျဆိုပါစို့ ။ အဲ့တာက ဖွဈနိုငျတယျလို့ သငျထငျပါသလား? ။၎င်းငျးလို ကြောကျဆောငျကိုဖောကျပွီးနထေိုငျတဲ့မွို့တဈမွို့က နှဈပေါငျး ၉,၀၀၀ ခနျ့ သကျတမျးရှိတဲ့ အီတလီနိုငျငံ မှာ အမှနျတကယျတညျရှိနပေါသေးတယျ။၎င်းငျးမွို့ရဲ့အမညျက Sassi di Matera ဖွဈသလို အီတလီရဲ့အနောကျတောငျဘကျမှာ တညျရှိပွီး ၎င်းငျးဟာ တရားဝငျတညျရှိဆဲသကျတမျးအရှညျဆုံးမွို့ဘဲဖွဈပါတယျ။
မွို့ထဲမှာ လူတှနေထေိုငျနသေေးတဲ့အခကျြက ပိုပွီး စိတျဝငျစားစရာကောငျးစပေါတယျ။မွို့ထဲမှာ နထေိုငျခွငျးက ရုနျးကနျမှုးမြားနှငျ့အတူ ပါဝငျပါတယျ။၂၀ ရာစုနှောငျးပိုငျး အထိ ၎င်းငျးနရောမှာ ရပေေးဝမှေု ၊ လြှပျစဈမီး နှငျ့ မိလ်လာစနဈတှေ မရှိခဲ့ပါဘူး။အိမျတှကေို ကြောကျဆောငျထဲသို့ ခြောမှစှေ့ာ ထှငျးထုထားပွီး ခြောကျကမျးပါးဆီကို တဖွညျးဖွညျးတကျလာတဲ့ရှုပျထှေးတဲ့ နောကျကြောလမျးကွားမြားနှငျ့ လှကေားထဈမြားကိုလညျး ဖနျတီးထားပါတယျ။
၎င်းငျးမွို့ကို UNESCO က ၁၉၉၃ ခုနှဈမှာ ကမ်ဘာ့အမှအေနှဈအဖွဈ သတျမှတျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ဒသေခံတှကေ အလှနျဝမျးမွောကျခဲ့ကွပါတယျ။၎င်းငျးမွို့တျောရဲ့ပုံရိပျဟာ ရုပျရှငျဇာတျကားတျောတျောမြားမြားမှာ screen time လညျး အပွညျ့အဝရရှိထားပါတယျ။လိုဏျဂူဥမငျမြားစှာကို နှေးထှေးတဲ့နအေိမျအဖွဈသို့ ပွောငျးလဲစသေလို အခြို့ကလညျး စားသောကျဆိုငျနှငျ့ ဟိုတယျမြားအဖွဈ ပွောငျးလဲစခေဲ့ကွပါတယျ။
Be the first to comment on "လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၉,၀၀၀ လောက်ကတည်းက ယနေ့တိုင် တည်ရှိနေသေးတဲ့ ကျောက်ဆောင်ကြားကမြို့လေး"